ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 07/05/12
7 July နှစ်(၅၀)ပြည့် အခမ်းအနားအား ပြောင်းရွှေ့ ကျင်းပမည်ကို ကြေညာ ၂၀၁၂-၇-၅
7 July နှစ်(၅၀)ပြည့် အခမ်းအနားအား ပြောင်းရွှေ့ ကျင်းပမည်ကို ကြေညာ
ဗကသများအဖွဲ့ ချုပ်မှ ပြုလုပ်မည့်7July နှစ်(၅၀)ပြည့် အခမ်းအနားအား ယခင် တော်ဝင်နှင်းဆီ ခန်းမတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ခဲ့သော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြုလုပ်ခွင့်မရပါသဖြင့် ၈၈
မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရုံးခန်း နေရာသို့ ပြောင်းရွှ့ကျင်းပ ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး အပ်
ရက်စွဲ။ ။၇-၇-၂၀၁၂ အချိန်။ ။၉း၀၀-မှ-၁၂း၀၀ နေရာ။ ။
၂၈၄/က ၊ ၁၆/၃ ရပ်ကွက်၊ ဝေဇယန္တာလမ်း ၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့ နယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:53 PM No comments:
အရှင် သရဏ၊ ဓာတ်ပုံ- Reiko's facebook
“မြန်မာကို ကမ္ဘာက လေးစားတာ သာသနာကြောင့်၊ ဒီသာသနာကို ကြည်ညိုလွန်းလို့ မြန်မာ ဦးဇင်းဖြစ်ချင်တဲ့ အရှင် သရဏ ကို သူပျော်သလောက်နေပါစေ” တဲ့၊ တိပဋိက ယောဆရာတော်က ပြောလိုက်တဲ့ စကားပါ။
ဒါဆို မြန်မာ ဦးဇင်းဖြစ်ချင်တဲ့ အရှင် သရဏဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။
တိပိဋိက ယောဆရာတော်နှင့် အတူ
သူကတော့ ဟိုး အရှေ့ဥရောပက ကမ္ဘာကျော် ကတ္တီပါ တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်ကြီး မစ္စတာ ဗားကလပ်ဗ် ဟာဗဲလ် ရဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ချက်ရီပတ်ဗလစ် (Czech Republic) နိုင်ငံက ချက်လူမျိုး တဦးပါ။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာကို ကြည်ညိုလွန်း လို့ ရှင် သာမဏေ အဖြစ်ခံယူခဲ့တယ်။ မြန်မာစာ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကိုလည်း အလွန် ချစ်မြတ်နိုး လို့ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို လည်း တန်ဘိုးထား ပြောကြားတဲ့ သူပါ။
မကြာသေးခင် ရက်သတ္တပတ်ကမှ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဆရာတော် ဦးပညာဝံသကို ဥပဇ္ဈာယ် ဆရာ အဖြစ်ခံ ယူကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှင်ရဟန်းဖြစ်လာတဲ့ အရှင် သရဏပါ။
သူဟာ မြန်မာ့မြေကို ခြေမချခင်၊ ထေရ၀ါဒ ရဟန်းတပါးအဖြစ် မရခင်ကတည်းက မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား ကို ကောင်းမွန် ပိုင်နိုင်စွာ ပြောကြားနိုင်ရုံ မကပါဘူး။ ချက်-မြန်မာ အဘိဓာန်စာအုပ်ကို လည်း ပြုစုထားနိုင် သူတဦးပါ။
အရှင် သရဏ ပြုစု ထားတဲ့ ချက်-မြန်မာ အဘိဓာန်စာအုပ်ဟာ ပထမဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအရင် ချက်-မြန်မာ အဘိဓာန်ဆိုတာ မကြားဖူးခဲ့ ပါဘူး။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ..ကိုလံဘိုမြို့ မှာ သွားရောက်နေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓစာပေ၊ မြန်မာစာတွေ သူက လေ့လာခဲ့တယ်။ တခြား မြန်မာ အပါအ၀င် ဗုဒ္ဓဘာသာ ရှင်ရဟန်းတွေကို သူက အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတယ်။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ မှာ နေပြီး သီဟိုဠ် ဘာသာစာပေ၊ စကား လည်း သူက ကျွမ်းကျင်တယ်။ မြန်မာရဟန်းတော်တွေ ထံ ကရော အခြား နေရာများကပါ မြန်မာစာ တတ်မြောက်လာပြီး မြန်မာစာမှာ တော်လွန်းလာတော့ နောက်ဆုံး သူဟာ ချက်-မြန်မာ အဘိဓာန်ကို ရေးသားပြုစုနိုင်ခဲ့ တာပါဘဲ။
အခုလို ချက်လူမျိုး ရဟန်းတော် အရှင် သရဏဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ရောက်ပြီး သူ့ရင်ထဲက အဖြစ်ချင်ဆုံး ကို အခုလိုလည်း ဖွင့်ဟ ထားပါတယ်။
“လူ့ဘဝကို ရတာဟာ ဒုလဘ္ဘတရားဖြစ်တယ်။ ဦးဇင်း ငယ်ငယ်ကတည်းက သူများနားလည်ရင် ကိုယ် နားမလည်သေးဘူး။ခုလို ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရဟန်းဖြစ် ဖို့ အများကြီးကြိုးစား ခဲ့ရ တယ်။ မြတ်ဘုရား သာသနာမှာ လူဖြစ်ရတာ ဒီဘဝမှာတင် နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ တန်အောင်ကြိုးစားရမယ်” လို့ အရှင်သရဏက ဆိုပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရှင် သရဏက ၀ိပဿနာ တရား ဘာဝနာ ကျင့်ကြံပွားများ အားထုတ်ပုံကို အခု ရန်ကုန်မြို့မှာ စနစ်တကျ အနီးကပ် သင်ယူလေ့လာနေပါတယ်။ ၅ နှစ်ကြာရင်တော့ တောရပ်မှာသွားပြီး တရား ကျင့်ကြံ မှာ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:49 PM No comments:
သမိုင်းမှတ်တမ်းလည်း ၀င်စေ ...။ နောင်တော့် နောင်တော်ကဗျာဆရာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတော်သား၊ အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသူများရဲ့ သက်စွန့်ဆံဖျား ရေးသားသွားခဲ့တာတွေကိုလည်း နှောင်းလူ (မျိုးဆက်သစ်) တို့ သတိထား ဂုဏ်ပြုနိုင်ကြရန် ရည်ရွယ်ရင်း ...
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:25 PM No comments:
Weekly Eleven 7-39 Hady
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:42 PM No comments:
7Day News 11-17 Hdwd
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:17 PM No comments:
Wednesday, July 05, 2012 News
၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့က ကျဆုံးခဲ့သော ကျောင်းသား ရဲဘော်များကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ (ရ.တက.သ) ၏ 'အိုးဝေ'စာကြည့်တိုက်နှင့် ပညာဒါန သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ၊ (၄)ရက် နံနက် (၉)နာရီက သန်လျင်မြို့နယ်၊ မြို့သစ် အနောက်ရပ်ကွက်၊ ကြံ့ခိုင်ရေးလမ်း အားကာဆိုင်တန်း၊ ဆိုင်ခန်းအမှတ်(၉) တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် ကိုပြုံးချို တို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကိုမင်းကိုနိုင် က အမှတ် တရ စကားပြောကြားခဲ့သည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:13 PM No comments:
စစ်တွေမြို့မ ဈေးကြိးအား ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီခန့်က စတင်ဖွင့် 5.7.2012
စစ်တွေမြို့မ ဈေးကြီးအား ယနေ့ နံနက် ၉
နာရီခန့်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယင်းဈေးတွင် ဘင်္ဂလီများ ပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်ခန်းများနှင့် ကုန်များကို ပိုင်ရှင်များ လက်သို့ အပ်နှံလိုက်ပြီး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဈေးအား ညနေ ၃
နာရီခန့်တွင် ပြန်လည် ပိတ်မည်ဖြစ် ပြီး
တနင်္ဂနွေနေ့ မှအပ အခြားရက်များတွင် ပုံမှန် ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:08 PM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကော့မှူးမြို့နယ် ခရီးစဉ်ပုံရိပ်များ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့ ဇူလိုင်လ ၅ရက် နံနက် က သူ၏ မဲဆန္ဒနယ်မြေ ဖြစ်သောကော့မှူးမြို့နယ်သို့ ဒေသခံများနှင့် တွေ့ဆုံရန် သွားရောက်ခဲ့သည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:24 PM No comments:
သေနတ် အဘိဓမ္မာကိုတူးဆွကြည့်ခြင်း (သို့) ကံ့ကော်ဝမ်းနည်းမှတ်တမ်း စံညိမ်းဦး
“၇ ဇူလိုင်ကိုမမေ့ကြနဲ့” တဲ့
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၅၀ ကစာသား
အခု . . . နှစ် ၅၀ ပြည့်ခဲ့ရာ
ဒါဟာ . . .
ငါမမွေးခင်က အစုလိုက်အပြုံလိုက် လူသတ်ပွဲအမှု
အမိုက်ဇာတ်ကိုရွှင်ရွှင်ကြီး ‘က’ ခဲ့သူတို့ရဲ့ သေနတ်အဘိဓမ္မာ
ငါအံ့သြ သြချရမိတဲ့ ငါ့တိုင်းပြည်သမိုင်းရယ်တဲ့လေ
၇ ဇူလိုင်လူသတ်ပွဲ တဲ့
ဦးသန့်ဈာပန အရေးအခင်း တဲ့
၇၅ ဇွန် ၆ ကျောင်းသားသပိတ် တဲ့
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော် ပုံ တဲ့
. . . . . . . . . . . . . .တဲ့
. . . . . . . . . . . . . .တဲ့
၇ ဇူလိုင် ၆၂ ဆိုတာ
နားပင်းသွားရတဲ့ ကံ့ကော်ပွင့်တွေကို အမျှဝေရမယ်။
၇ - ၇ - ၆၂
( သနက - ၄ ) တင်စစ်ကားနှစ်စီး
ဘီလူးယိမ်းနဲ့ ဂျီသရီး ဂျီဖိုး သစ်တွေကိုပိုက်လို့
၃ မိနစ်ပစ် ၂ မိနစ်နား ၃ မိနစ်ပစ်
ရာကျော် ကျောက်တိုင်ဆိုတာရှိခဲ့ပါပြီကော. . ကံ့ကော်။
မန္တလေးဆောင်၊ ရာမညဆောင်၊ ပင်းယဆောင် နံရံကကျည်ဆံရာ
တကသ မြက်ခင်းစိမ်းနဲ့ အဓိပတိလမ်း
ဓားဓားချင်း လှံလှံချင်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရဲရင့်လိုက်ကြပုံများ
အလျား ၇၇ လက်မ၊ အနံ ၆၂ လက်မ
ဇူလိုင် ၇ ရက် × × ၇ ရက်ဇူလိုင်
မမေ့နိုင်တဲ့ကျောင်းသားသမိုင်း × × ထာဝစဉ်နီ . . .
ရက်စက်သူများ ချိုးပစ်သည်” တဲ့
ဘ၀အားလုံးနစ်မွန်းခဲ့ရာ . . .
ဟုတ်ကဲ့ . . .
၁။ “ဓားဓားချင်း၊ လှံလှံချင်း ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် သွားမတဲ့” တဲ့။
၂။ “ စစ်တပ်ဆိုတာ ဘယ်တော့မှမိုးပေါ် ထောင်မပစ်ဖူး” တဲ့။
နှစ် ၅၀ ပြည့်ခဲ့အရေးတော်ပုံ
( ဘယ်သမိုင်း ခောတ်မှာမဆို )
သစ္စာငတ်သူ ( ငါတို့ )
ဒေါင်းအလံကိုလည်းမဖိနဲ့ ဆိုလား . . .
အမှောင်မှာ အဆန်ကိုပျံနေမယ့် သစ္စာဌက်
အလင်းဆွတ်ရစမြဲပေါ့ ကံ့ကော်ရယ် . . . . ။
စံ ညိ မ်းဦး
၁။ တရားခံ ၂။ စစ်နှင့်ပြည်သူ ၃။ တိုင်တည်ခြင်း ၄။ တန်ဘိုးမသိသူ
( ဗကသ ) နှင့်အတူ ကိုအောင်ဆန်း၊ ကိုဗဟိန်း၊ ကိုအောင်ကျော်၊ အာဏာရှင် ကိုလှရွှေမှသည် ဟယ်ရီတန်၊ ကိုသက်၊ ကိုဗဆွေလေး၊ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦးတို့အလယ်
ကိုဖုန်းမော်၊ ကိုစိုးနိုင်တို့အဆုံး စသည်ဖြင့် ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးသမိုင်းကို အသက်အသွေးဖြင့် လမ်းပြခဲ့ကြသည့် မြောက်မြားစွာသောအာဇာနည်၊သူရဲကောင်း အပေါင်းတို့အား ယခုကဗျာဖြင့် ဦးညွှတ်ဂုဏ်ပြုပါ၏။
by Nay Zaw on Thursday, July 5, 2012
at 1:48pm ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:12 PM No comments:
ဗကသ အလံနှင့် တံဆိပ်
(မူရင်းစာရေးဆရာ Willian Ernest Henlay ၏) မူရင်းကဗျာကို အိုဝေမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်း( အမျိုးသား ခေါင်ဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) မှ ဘာသာပြန်ဆိုပြီး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေသော် “အိုးဝေ” မဂ္ဂဇင်းတွင် ရေးသားခဲ့တဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပါ။ ဆဲဗင်း ဇူလိုင် နှစ်ငါးဆယ်ပြည့်အတွက် ဂုဏ်ပြုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ငါ ကား မတုန်လှုပ်၊ မငိုကြွေး
ငါ၏ ဦးခေါင်းတို့သည် သွေးဖြင့် ချင်းချင်းနီ၏
သို့သော် ညွတ်ကား မညွတ်
သေခြင်းတရားသည် ကြောက်မက်ဖွယ် ငံ့လင့်၏
သို့သော် ငါအား မတုန်လှုန်သည်ကိုသာ တွေ့ရအံ့
သုဂတိ သို့ သွားရာ တခါးဝသည်
ငါ၏ အပြစ်များ မည်မျှပင်ရေး ခြစ်ထားစေ
ငါသာလျှင် ငါ ဘ၀၏သခင် ဖြစ်တော့သည်။
ဒိုင်းနမိုက်ဖြင့် ဖြိုခွင်းခံရသော ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂ အဆောက်အဦ နှင့် ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက် အရေးတော်ပုံတွင် ကျဆုံးသွားခဲ့သော မြောင်းမြမှ ကျောင်းသား ကိုကျော်ဝင်း ( ၀ိဇ္ဇာ-ခ-တန်း) ၏ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က သွေးနှင့် သူကိုယ်တိုင် ရေးသားခဲ့သော မန္တလေးဆောင် နံရံမှ သွေးစာတန်း။
အိမ့်သံစဉ်, ko tunwai
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်5.7.2012 ကြာသာပတေးနေ့ယနေ့ တွင် အောင်ဇမ္ဗူပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဆရာတော်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရေသန့်စက်တည်ဆောက်နိုင်ရန်
အလှူငွေပေးအပ်ခဲ့လို့ သိရတာနဲ့ ရေအကျိုးတိုးပွားခံစားရပုံကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်.. ရေ၏ အကျိုး(၁၀) ပါး
အမျိုးဘာသာ သာသနာ ကိစ္စဖြစ်သောကြောင့် အကျိုးကိုလို၍ လှူဒါန်းခြင်း မဟုတ်သော်လည်း ရေအကျိုး (၁၀) ပါးကို သိရှိစေရန်မိမိမှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အမိမြန်မာပြည်အတွက် သံဃာတော် များအားတတ်နိုင်တဲ့ဖက်မှ လှူဒါန်းရန် တန်ဘိုးထားလေးစားသောအားဖြင့် ..ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှဖော်ပြအပ်ပါတယ်။
အမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ အလှူရှင်များ အားလုံး နတ်လူသာဓုခေါ်စေနိုင်ရန် ဆုမွန်ကောင်းများ ပေးပို့ အပ်ပါတယ်...။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 4:19 PM No comments:
မန္တလေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) မန္တလေး- ရုံးခွဲ ကို ယမန်နေ့ ဇူလိုင်လ ၄ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီ။ နေရာကတော့ မန္တလေးမြို့ ၁၂ လမ်း ၊ ၆၅လမ်းနဲ့ ၆၆ လမ်းကြား ဖြစ်ပါတယ်။
စတင် ဖွင့်လှစ်တဲ့နေ့မှာဘဲ လာရောက် လုပ်သူ ၂၀၀ လောက်ရှိပါတယ်တဲ့။ ပုံမှန် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ ဘဏ် သွင်းငွေ ၂၅၇၀၀ ကျပ် ဖြစ်ပြီး အသက်ကြီး၊ နာမကျန်းသူများအတွက် မန္တလေး စည်ပင် နယ်နမိတ်အတွင်း အိမ်တိုင်ရာရောက် ၀န်ဆောင်မှုပေးမှာဖြစ်ပြီး ဘဏ်သွင်းငွေနဲ့ စာအုပ်ဖိုး ကျပ်ငွေ ၄၀၀၀၀ ကုန်ကျပါမယ်တဲ့။
လျှောက်လွှာတင်ပြီး ရက်သတ္တပတ် ၃ ပတ်အတွင်း စာအုပ်ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
နိုင်ငံကူး လက်မှတ် လျှောက်ထားသူတွေအနေနဲ့ ထုံးစံအတိုင်း နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်၊ အိမ်ထောင်စု စာရင်းဝင် ( ပုံစံ- ၁၀ )၊ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ ဖြစ်ပါက ပညာရေး ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံချက်၊ အသက် ၁၀ နှစ်အောက် ကလေးများဖြစ်ပါက မွေးစာရင်းပါရှိရမှာဖြစ်ပြီး အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်းများ ဖြစ်ပါက အလုပ်မှ အလုပ်မှ နုတ် ထွက်စာ သို့မဟုတ် ပင်စင်စားများ ဖြစ်ပါက ပင်စင်စာအုပ်ယူဆောင်လာရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ကျန်တဲ့ ပုံစံ ၁၇ ၊ ပုံစံ ၁၉ ဖိုးတွေနဲ့ ရပ်ကွက်နဲ့ ရဲစခန်း ထောက်ခံစာကြေး၊ ပညာရေး ကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာကြေးတွေ ပါရင်တော့ ဒီထက်ပိုပြီး ကုန်ကျနိုင်မယ့်သဘောပါ။
Thursday, July 05, 2012 အိမ့်သံစဉ်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:40 PM No comments:
★ နှစ်(၅၀)မြောက်ရွှေရတု ဇူလိုင်(၇) အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားဆန္ဒပြပွဲဖိတ်ကြားခြင်း
★ နှစ်(၅၀)မြောက်ရွှေရတု ဇူလိုင်(၇) အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားဆန္ဒပြပွဲဖိတ်ကြားခြင်း ★
၁ ရက်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သည်ခေတ်သစ်သမိုင်းအဆက်ဆက်တွင်ဗမာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးစသည့်နယ် ပယ်ကဏ္ဍအသီးသီးတွင်နိုင်ငံသားကောင်းလူတော်လူကောင်းမြောက်များစွာကိုမွေးထုတ်ပေးခဲသလိုခေတ်ပြောင်း တော်လှန်ရေးအသီးသီး၏ အမျိုးသားရှေးဆောင်လမ်းပြနယ်မြေ တခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပေသည်။ ဤရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နယ်မြေနှင့်သမဂ္ဂကိုစစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်နေ၀င်းခေါင်းဆောင်တဲ့တော်လှန်ရေးကောင်စီကဘယ်တော့မှခေါင်းမဖော် နိုင်အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အပြတ်ရှင်းခဲ့သည်မှာ လာမည့်ဇူလိုင်(၇)ရက်ဆိုလျှင် နှစ်(၅၀)ပြည့်တော့မည်ဖြစ် သည်။ကျောင်းသားများကိုဖမ်းခဲ့၊သတ်ခဲ့၊ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုခေါင်းဖော်မကြည့်ရဲအောင်ဦးချိုးပြသည့်သဘောဖြင့်ကလောင်ကိုင်သောကျောင်းသားထုနှင့်ကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုမိုင်းခွဲဖြိုချ၊ သတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။စစ်အုပ်စုခေတ်အ ဆက်ဆက်ကလည်းဤနယ်မြေနှင့်ဤသမဂ္ဂကိုနှစ်ပေါင်း(၅၀)ကာလတလျှောက်လုံးဆက်တိုက်နှိပ်ကွပ်ခဲ့ကြ သည်။ကျောင်းသားတို့ကလည်းခွပ်ဒေါင်းစိတ်ဓါတ်ဖြင့်ဤစစ်အာဏာရှင်များနှင့်စစ်အုပ်စုအဆက်ဆက်ကိုမည် သည့်အခါမျှဦးမညွတ်ခဲ့ကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေဆဲပါ။ဗိုလ်နေ၀င်မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဗိုလ်သိန်းစိန်စစ်အုပ်စုက လည်းယနေ့အချိန်အထိကျောင်းသမဂ္ဂများပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုများကိုအသိအမှတ်မပြုသေး၊မိုင်းခွဲသတ်ဖြတ်မှုကို ၀န်ခံတောင်းပန်ရန်ဝေးလေစွ၊မသိဟန်ဆောင်နေကြဆဲဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ကျောင်းသားသမဂ္ဂပြန်လည်တည် ဆောက်ရေး၊လွတ်လပ်သည့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှင့်လွတ်လပ်ပညာရေးစနစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းရေး၊စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီနှင့်ပြည်သူ့အခွင့်အရေးများအပြည့်အ၀ရရှိရေးတို့ကိုဦးတည်ကာနှစ်(၅၀)ရွှေရတုဇူလိုင်ဆဲဗင်းဂုဏ်ပြု အခန်းအနားဆန္ဒပြပွဲကိုအောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်းပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသဖြင့်မပျက်မကွက်တက်ရောက်ကြပါရန် လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေရက်။ ။ဇူလိုင်(၇)ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်(စနေနေ့)
နေရာ။ ။၁၀ E ၊ ၇၇လမ်း၊ Madison နှင့် Fifth Avenueကြား၊ မန်ဟတ်တန်၊ စစ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးရှေ့
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ကိုရဲထွဋ်(၃၄၇-၂၂၆-၀၅၇၂)၊ဒေါက်တာခင်စိန်(၉၁၉၉၂၃၁၉၆၁)၊ကိုခွန်ထွန်းတောက်(၃၀၁၇၀၆၁၅၉၁)၊ ကိုအောင်သန်း(၉၁၉၂၄၀၉၃၈၃)၊ ကိုမင်းနိုင်(၇၁၆၅၄၄၁၁၇၂)၊ကိုရဲလွင်(၉၁၇၈၈၉၁၉၄၆)
ifbncexecutive@gmail.com, http://ifncblog.blogspot.com/, http://www.ifbnc.org/ , http://www.ifbnc.org/bur
ယနေ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပြုတဲ့ သူများထဲမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အချို့ပါဝင်
သတင်း .. ဒီမိုဝေယံ
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:16 PM No comments:
တရုတ် ပြည်သူ့ လုံခြုံရေး ၀န်ကြီး Meng Jianzhu ဟာ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအို ၃ နိုင်ငံကို ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း သွားရောက်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူဟာ နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်တယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာလတုန်းက ပီကင်းမှာ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပါပြီ။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် မှုခင်းတိုက်ဖျက်ရေး ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့တာပါ။
ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုနဲ့ Meng Jianzhu
Meng Jianzhu (ဓာတ်ပုံ - ရန်ကုန်မြို့ တရုတ်သံရုံး)
အဲဒီဆွေးနွေးမှုတွေအပြီး လအတန်ကြာမှာ ရွှေတြိဂံနိုင်ငံ လုံခြုံရေးအင်အားစုတွေရဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး တာချီလိတ်မြို့နားမှာ မူးယစ်ရာဇာ နော်ခမ်းနဲ့ သူ့နောက်လိုက်တွေကို နှိပ်ကွပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နော်ခမ်းတို့ကို စစ်ဆင်အပြီးမှာ Meng Jianzhu တယောက် ရွှေတြိဂံနိုင်ငံတွေကို သွားရောက်မယ် ဆိုတဲ့သတင်း ထွက်ပေါ်လာတာပါ။
သူဟာ မြန်မာအာဏာပိုင်တို့နဲ့ တနင်္လာနေ့မှာ တွေ့ဆုံမှာပါ။
သတင်းတွေအရ ဆိုရင် သူဟာ တရုတ်ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များအတွက် အဓိက တာဝန်ရှိသူတဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်-တရုတ် နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကိုလည်း သွားရောက်ဆွေးနွေးခဲ့သူပါ။
အခုတော့ ရွှေတြိဂံဒေသ အာဏာပိုင်တို့နဲ့ တွေ့နေရပြန်ပါပြီ။
ရွှေတြိဂံဒေသဟာ တရုတ်ပြည်ထဲကို မူးယစ်ဆေးတွေ တင်ပို့တဲ့ လမ်းကြောင်းတခု ဖြစ်နေရုံတင်မကပါဘူး၊ မကြာသေးခင်က ဒီဒေသ မဲခေါင်မြစ်ထဲမှာ တရုတ်သင်္ဘောသားတွေ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီဒေသ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအတွက် အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:11 PM No comments:
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် (ဇူလိုင် ၄ ၂၀၁၂)
မြေခွေးတွင်းသို့ဝင်ခြင်း ( Enter the Fox Den)
မေလ (၂) ရက်နေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာနဂိုတောင်း ဆိုနေတဲ့ “၂၀၀၈အခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါမယ်” ဆိုတဲ့အစား၊”လေးစားလိုက်နာပါ့မယ်”လို့ ပြောင်းပေးဘို့ တောင်းဆိုတာကိုရုပ်သိမ်းပြီး မူလ (၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေမှာ ရေးသားထားတဲ့အတိုင်း ဂတိသစ္စာပြုပြီး လွှတ်တော်ကိုတက် ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပါတီကိုပြည်သူတွေကဝက်ဝက်ကွဲမဲပေးခဲ့ကြတာအထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကနေ အ ရပ်သားအစိုးရအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့တာ (၂) ကြိမ်ရှိပါပြီ။ ပထမအကြိမ်ကတော့ တော်လှန်ရေးကောင်စီဦးစီးရေးဆွဲခဲ့တဲ့ (၁၉၇၄) အခြေခံဥပဒေကို အသက်သွင်းပြီး မဆလပါတီတခုတည်းသာ ရှင်သန်ခွင့်ပေးတဲ့အရပ်သားအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမဆလပါတီဟာလဲ ထိပ်တန်း စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးလိုလို အရပ်ဝတ်ပြောင်းပြီး အာဏာကိုဆက်လက်ရယူခဲ့ကြတာမို့ကုလားကြီးနဲ့အရာကြီးသဘောမျိုးသာဖြစ်လို့ ပြည်သူတွေ သိသိကြီးနဲ့သေနတ်မိုးထားလို့ခံခဲ့ကြရတာပါ။ ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကနေ ဦးနေဝင်းဖြစ်တာကလွဲလို့အုပ်ချုပ်မှု၊ ဖိနှိပ်မှုတွေမပြောင်းလဲခဲ့ပါဘူး။ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီးပေါ်လာမှ ပါတီစုံသွားမလား? တပါတီစံနစ်ဘဲသွားမလား ? ဆိုတာကို မမေးချင်မေးချင်ထုတ်ပြောလာရတာအများအသိ။
ငြိမ်ပိ တဖြစ်လဲ နအဖလက်ထက်မှာလဲ ဦးနေဝင်းနည်းတူ ဗိုလ်ချုပ်သန်းရွှေကသူ့စိတ်ကြိုက် (၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေ ကိုရေးဆွဲပြီး အတည်ပြုခဲ့ပြန်ပါတယ်။ (၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေကို (၁၉၉၃) ခုနှစ်လောက်ကစပြီး အမည်ခံအမျိုးသားညီလာခံကနေ စစ်တပ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ လူတွေနဲ့စိတ်ကြိုက်ကိုယ်လိုသလိုရေးဆွဲ၊ စစ်တပ်ရဲ့သြဇာကိုနိုင်ငံရေးအပေါ် လွှမ်းမိုးပြီး အတင်းအကြပ် ပြည်သူတွေကိုချိမ်းခြောက်အတည်ပြုခဲ့တာပါ။ အခြေခံဥပဒေတခုရေးဆွဲရာမှာပြည်သူ့အကျိုးအတွက် အချိန်ယူရေးဆွဲဒါမျိုးဟာ သဘာဝကျလို့ လက်ခံနိုင်ပေမဲ့ ပြည်သူ့အပေါ်စစ်အာဏာစက်လွှမ်းမိုး နိုင်ဖို့အချိန်ယူပြီး (၁၅) နှစ်ကြာရေးဆွဲခဲ့တာဟာသမိုင်းအမဲစက်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအခြေခံဥပဒေအရရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲ အတိုက်အခံပါတီတွေကိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအမျိုးမျိုးလုပ်ပြီး နောက်ဆုံးမဲရှုံးတဲ့နေရာတွေမှာ ကြိုတင်မဲ ဆိုတာတွေနဲ့ညစ်ပတ်အနိုင်ယူခဲ့တာအများအသိပါ။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလူမျိုးတွေဟာအကောင်းကိုမြင်တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်လို့၊ ဦးသိန်းစိန်သမတအဖြစ် ကျမ်းကျိန်ပြီး တက်လာတဲ့အခါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို လုပ်လာတာကိုတွေ့ရတော့ဝမ်းသာအားရနဲ့အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုအားပေးတဲ့သူတွေထဲမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လဲပါဝင်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဦးသိန်းစိန်ကို သူမ အနေနဲ့ယုံကြည်ကြောင်း အတိအလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ တဦးနဲ့တဦး တဖွဲ့နဲ့တဖွဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်နိုင်ဘို့မှာ ပထမယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှု မရှိဘဲ ဘယ်လိုမှ တဦးနဲ့တဦးလက်တွဲလုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒေါ်စုမြေခွေးတွင်း (လွှတ်တော်) ထဲကို စွန့်ပြီးဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်ထဲမှာ ကြံဖွတ်အမတ်မြေခွေးအုပ်ကြီးနဲ့ မကြာခင်ကအခွင့်ထူးခံ၊ ရာထူးပိုကြီးတဲ့စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တွေနဲ့အစားထိုးလိုက်တဲ့ ဝံပုလွေ (၂၅) ရာခိုင်နှုန်း အုပ်ကလဲရှိနေပါတယ်။ ဒီအုပ်ကြီးနှစ်အုပ်စုဟာပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်အစစ်အမှန်တွေက လွှတ်တော်တွင်းမှာ ဒီမိုကရေစီနည်းကျပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို တင်လာခဲ့ရင်ရိုက်ချဘို့တာစူနေကြတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ သူတို့အကျိုးစီးပွါးကိုထိခိုက်မယ်လို့ မြင်တဲ့ဘယ်ပြောင်းလဲမှုမျိုးကိုမဆို တိုင်းပြည်ဘယ်လောက်ဘဲအကျိုးရှိရှိ အစည်းအဝေးကြမ်းခင်းပေါ် မရောက်ခင်ကတည်းက လွှတ်တော်ဥက္ကဌကနေ ပယ်ချကောင်းပယ်ချနိုင်ပါတယ်။
အခုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့လွှတ်တော်ထဲကိုရောက်လာပြီးမရှေ့မနှောင်း ဒုသမ္မတဦးတင်အောင်မြင်ဦးနှုတ် ထွက်လွှာတင်တဲ့သတင်းထွက်လို့ လာပါတယ်။ ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုလား? နအဖရဲ့ကြိုတင်ချထားတဲ့ကျားကွက်လား? အားလုံး စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။
တင်အောင်မြင့်ဦးဟာ တင်းမာသောအုပ်စုမှဖြစ်လို့ ဒီလိုတင်းမာရေးလမ်းစဉ်လိုက်နေသူနှုတ်ထွက်သွားခြင်းဟာ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်သမား ဦးသိန်းစိန်တို့အုပ်စုအနိုင်ရ အားကောင်းလာတာဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်တိုးတက်ရေးအတွက် ကောင်းတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဘဲလို့ ယူဆသူတွေ၊ အကောင်းမြင်ဝါဒသမားတွေကဆိုကြပါတယ်။ ဒေါ်စုကိုဒုသမ္မတနေရာပေးချင်ပေးမယ်လို့လဲယူဆသူတွေရှိပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်လဲ ဝန်ကြီးနေရာ တနေရာပေး ချင်ပေးမယ်လို့ထင်ကြေးပေးကြသူတွေပေးကြပါတယ်။ စစ်အာဏာမလျှော့ကျရေးအတွက်ကျားကွက်ရွေ့သလို အကွက်ချပြီးကစား နေတာလား? တိုင်းပြည်ကြီးကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေနေတာကိုမကြည့်ရက်လို့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေနိုင်ငံတကာမှာမျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ အလုပ်သမားတွေ အဖြစ်၊ အိမ်စေတွေအဖြစ်သွားလုပ်နေရတာကို တွေ့မြင်ရတဲ့အခါယူကြုံးမရဖြစ်ပြီး ငါ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေကို ငါတို့ကယ်တင်မှရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ တကယ် ပြောင်းလဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလားမဝေးတော့တဲ့အနာဂါတ်မှာကျွန်တော်တို့တတွေအဖြေရှာနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်ဟာအမှန်တကယ်စိတ်ရင်းမှန်သူဖြစ်ပြီး တိုင်းပြည်ကောင်းစားတာကိုမြင်ချင်တဲ့အတွက်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအစိုးရ နဲ့တွဲလုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်မျိုးချစ်စိတ်စေတနာအရင်းခံကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကြီးတွင်းရှိ ပြည်သူအားလုံးအတွက် ကျဆုံးခဲ့ရသော ဂုဏ်သိက္ခာများကိုပြန်လည်ဆယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အားကိုယူပြီး ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကျန်းမာရေး နဲ့ပညာရေးတွေမှာ ထိထိရောက်ရောက် ပြည်တွင်းပြည်ပအင်အားစုတွေရဲ့ အကူအညီကိုရယူပြီးပူးပေါင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အတိုက်အခံ၊ စစ်အုပ်စုဆိုတဲ့ အမြင်တွေ ပျောက်ကွယ်ပြီး အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးကို လက်တွေ့ကျကျလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်၊ လွတ်လပ်ရေးရစကနေ ၊ ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့် နှစ် (၆၀) အတွင်း ယနေ့အထိ ပြည်သူသန်းနဲ့ချီပြီး သေဆုံးခဲ့ရသလို၊ မြန်မာပြည်သူတွေကို ဆင်းရဲတွင်းပို့နေတဲ့ဒီပြည်တွင်းစစ်ကိုလဲအမြန်ဆုံး ငြိမ်းသတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ မကြောက်မရွံဘဲပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရဲရဲတင်းတင်းဖွင့်ပေးခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်အပါအဝင် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်များကိုကမ္ဘာ စံချိန်မှီခွင့်ပြုခြင်း၊ လူ့လွတ်လပ်ခွင့်ချိုး ဖေါက်သူမှန်သမျှကိုကြောသား၊ ရင်သားမခွဲခြားဘဲ ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူခြင်းဖြင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူများ၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုရယူမယူစောင့်ကြည့်ရပေမည်။
ထို့ပြင် ခရိုနီများလက်ဝါးကြီးအုပ် မတန်တဆဈေးတင်ထားသောတယ်လီဖုံးဈေးကွက်၊ ဟော်တယ်လုပ်ငန်း၊ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း၊ လယ်ယာမြေ မတရားသိမ်းယူမှုများကိုတရားမျှတမှုရှိစေရန်လူတိုင်း တရားမျှတစွာလွတ်လပ်စွာယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခွင့်၊ ထုတ်လုပ်ခွင့်တို့ကိုဖန်တီးပေးရမည်။ ကြိုးနီစံနစ် မထားရှိဘဲ သမ္မတမှတိုက်ရိုက် ခန့်ထားဖွဲ့စည်းပေးသော “အထူးစစ်ဆေးတိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ရေးဌာန” SIDDB(Special Investigation and Direct Decision Branch)ကိုဖန်တီး၍ထိုဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးကအခင်းဖြစ် ရာသို့တိုက်ရိုက်သွားရောက် ဖြေရှင်းစေခြင်းဖြင့် မသမာမှုများ၊ ကြားခံ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူမှုများ လက်တွေ့ကွင်းဆင်း ဖြေရှင်းဖြင့်အချိန် ကြာမှု၊ နှင့်ကြိုးနီစံနစ်တို့ကိုတားဆီး နိုင်ပေလိမ့်မည်။
ယနေ့လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာရရှိရေး လှုပ်ရှားမှုသည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဆင်းရဲမွဲတေရခြင်းအကြောင်းရင်းထဲမှတခုဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲမွဲတေရခြင်းအကြောင်းရင်း (၃) ချက်ရှိသည်။
လူ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခဲ့ခြင်းကြောင့် မတရားဥပဒေများကြီးစိုးလာခဲ့ ရသည်။ ထို့ကြောင့်ခရိုနီစီးပွါးရေးထွန်းကား လာပြီးလက်တဆုပ်စာလူတစုနှင့် ဗိုလ်ချုပ်များသာချမ်းသာလာခဲ့ပြီး ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံး ကုန်းကောက် စရာမရှိဆင်းရဲမွဲတေသွားခဲ့ရသည်။ သဘာဝအရင်းအမြစ်များ၊ လူသားအရင်းအမြစ်များအတိုင်း အဆမရှိဆုံးရှုံး ခဲ့ရသည်။ ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုမှာ မယုံကြည်နိုင်စရာအထိမိုးနဲ့မြေပမာကွာခြားသွားခဲ့ရသည်။
၂။ ပြည်တွင်းစစ်အဆုံးမသတ်နိုင်ခြင်းသည် တချက်။
ပြည်တွင်းစစ်ကြောင့်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောလူ့အသက်သိန်းသန်းချီပြီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်အတွက်လူသားရင်းမြစ်များယုတ်လျော့ရော့နည်းသွားခဲ့ရသည်။ လူ့အသက်သာမကအိုးအိမ်တိုက်တာအဆောက်အအုံများပါနှစ်ပေါင်း (၆၀) အတွင်း ပျက်စီးခဲ့မှုများအားလုံးသည် ဘီလီယံနှင့်ချီ၍ရှိသည်။ ပြည်တွင်း စစ်ကြောင့်စီးပွါးရေးကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်သဖြင့် တိုင်းပြည်မွဲတေလာခဲ့ရသည်။
တိုင်းပြည်တိုးတက်ဖွံဖြိုးရန်မှာစက်မှုလက်မှုတိုးတက်ဖွံဖြိုးဖို့လိုအပ်သည်။ စက်မှုလက်မှုတိုးတက်ဖွံဖြိုးရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်လုံလောက်စွာရဖို့ လိုသည်။ လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်အောင်မရရှိသောနိုင်ငံသည် ဘယ်တော့မှတိုးတက်ဖွံဖြိုးမှုရနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ စစ်အစိုးရမှလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်မှုကို ပြည်တွင်းသုံးစွဲမှုထက်ပြည်ပသို့ရောင်းချ၍ မိမိအိတ်ထဲနိုင်ငံခြားငွေထည့်ရန်သာ စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည့်အတွက်ပြည်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုး မှု မရှိဘဲရရစားစား အသေးစားလုပ်ငန်းရှင်လေးများဘဝမှမတက်နိုင်ဘဲရှိသဖြင့်ပြည်တွင်းလိုအပ် ချက်ကိုပြည်ပမှသာအဓိကတင်သွင်းရသဖြင့်ပြည်တွင်းမှ ကုန်ကြမ်းများဈေးပေါ်ပေါ်ဖြင့်ထွက်သွားပြီးပြည်ပမှ ကုန်ချောများ ဈေးကြီးဖြင့်ဝင်ရောက်လာပြီး တိုင်းပြည်လိုငွေပြပြီး ကြွေးလည်ပင်းခိုက်လာသည်မှာ အဆန်းမဟုတ်ချေ။ ထို့ကြောင့်စီးပွါးရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှာ ဒေါ်စုပြောသကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုမရှိအောင်အလေးထားသော၊ အလုပ်သမားများ ရပိုင်ခွင့်ခံစားပိုင်ခွင့်တို့ကိုလေးစားလိုက်နာသော၊ပြည်တွင်းကုန်ချောထုတ်လုပ်သော စက်ရုံအလုပ်ရုံများရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်လာလျှင် ပြည်သူတို့အလုပ်အကိုင် များ ရရှိလာပြီးစီးပွါးရေးချောင်လည်လာကြမည်ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် တချို့ကဦးသိန်းစိန်အစိုးရသည်အမှန်တကယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးထက်၊ စစ်တပ်လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားမှုကို အချိန်ဆွဲနိုင်သမျှဆွဲထား နိုင်ရေးကို ဦးတည်၍အပေါ်ယံပြောင်းလဲမှုတို့ကိုပြုလုပ်နေခြင်း (Superficial Change) ဟုဝေဖန် သုံးသပ်ကြသည်။ ထိုသူတို့ထံတွင်လည်း သံသယဖြစ်လောက်သည့် ထောက်ပြချက်များကရှိနေခဲ့သည်။ လွှတ်တော်အတွင်း ကိုယ်စားလှယ်များ မိမိတင်ပြဆွေးနွေးလိုသည်ကို လွှတ်တော် ဥက္ကဌထံတင်ပြ၍ဥက္ကဌကခွင့်ပြုမှသာ ဆွေးနွေးခွင့်ရှိသည်မှာ လွှတ်တော်တွင်းတွင်ပင်အများက သင့်တော်သည်ဆွေးနွေးသင့်သည်၊ မဆွေးနွေးသင့် ဆိုသည့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်ကိုပေးမထားဘဲ လွှတ်တော်ဥက္ကဌတဦးတည်းကသာ ဦးစွာဆုံးဖြတ်ခွင့်ကိုယူထားသည်ဟုထောက်ပြခြင်း။ (၈၈) မျိုးဆက် ခေါင်းဆောင်များ၏ ပြည်ပထွက်ခွင့်ပတ်စပို့ကို ထုတ်မပေးဘဲထားခြင်းနှင့်ပြည်ပ ရောက်စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး အင်အားစုများကို သမ္မတက ပြန်လာကြပါဟုနှစ်ကြိမ်ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားခဲ့သော်လည်း တကယ်တန်းသွားရောက်လည်ပတ်ရန်လျှောက်ထားသူများကိုဗီဇာထုတ်မပေးခြင်းအပြင် သံအမတ်ကြီးထံသို့ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးမလုပ်ခဲ့ဘူးကြောင်း၊ ပြည်တွင်းရောက်လျှင်နိုင်ငံရေးလုပ်နေသူ များကိုတွေ့ဆုံခြင်းအားပေးခြင်း မပြုလုပ်ပါဟု ဝန်ခံလက်မှတ်ရေးထိုးရမည်ဆိုသည်မှာ လက်တွေ့တွင်အပြောနှင့်အလုပ်မညီကြောင်းထောက်ပြကြသည်။
အဓိကထောက်ပြချက်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများအားလုံးကိုလွှတ်မပေးဘဲ တချို့တဝက်ကိုသာလွှတ်ပေးပြီး (၄၀၀) နီးပါးကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထား ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟူ၍မရှိဟု အစိုးကိုယ်တိုင်က စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအာဏာပိုင်များအသုံးအနှုန်းအတိုင်း ပြောကြား၍ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများရှိခြင်းကို ဗြောင်ငြင်းပယ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရကိုယုံကြည်ရန်ခက်စေခဲ့သည်။
ထို့ပြင် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို လျော့ပေးသည်ဆိုသော်လည်း ဆင်ဆာရှိနေသေးသည့်အပြင် ပြည်သူသန်း (၆၀) အတွက်သတင်းစာ (၄) စောင်သာရှိနေပြီး ထိုဖြန့်ချီနေသောသတင်းစာများမှာလည်း အစိုးရပိုင်သတင်းစာများဖြစ်သည့်အပြင် ဝါဒဖြန့်သတင်းများသာ (၁၉၆၃) ခုနှစ်မှ စ၍ယနေ့အထိ လွှမ်းမိုးနေခဲ့သည်။
ပြည်သူများကို သတင်းမှန်ဖြန့်ချီသည့် ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာများထုတ်ဝေနိုင်မှုကို ယနေ့အထိမပေးသေးဘဲထားခြင်းကြောင့် လက်ရှိအစိုးရကို အမှန် တရားကိုဖုံးကွယ်လိုသောစိတ်ရှိနေသည် ဟုမြင်ကြသည်။ သို့ရာတွင်မကြာသေးမှီက ပြည်သူပိုင်သတင်းစာများ အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန် ဆွေးနွေးပွဲ လုပ်သည့်အကြောင်းကို ဖတ်လိုက်ရသည်။ ပါဝင်ဆွေးနွေးကြသူများကနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၏ အရည်အသွေးသည် ကျဆင်းလျက်ရှိပြီး အစိုးရသတင်းစာများတွင် ပြည်သူစိတ်မဝင်စားသည့်နိုင်ငံအကြီးအကဲများ ဖဲကြိုးဖြတ်နေပုံ၊ ခရီးလှည့်လည်နေပုံများကို နေ့တဓူဝဖေါ်ပြနေခြင်းကို ဖြုတ်သင့်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုစိတ်ဝင်စားမည့်သတင်းများကိုပို၍ထည့် ခြင်းဖြင့်အရည်အသွေးကိုမြှင့်တင်သင့်ကြောင်း။ ထို့ပြင် တချိန်ချိန်တွင် ပေါ်လာမည့်ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာများကို ယှဉ်နိုင်ရန်ယခုကထည်းကစဉ်းစားပြုပြင်ရမည့်အကြောင်းဆွေးနွေးချက်သည်၊ မကြာခင်ကာလတွင်သတင်းစာ လွတ်လပ်ခွင့်၊ စာပေလွတ်လပ်ခွင့်ရတော့မည်လောဆိုသည့်အတွေးကိုဝင်ရောက်လာစေသည်။ တဖက်တွင်လည်း ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးက စာနယ်ဇင်း တင်းကြပ်မှုကို လျော့ပေးမည်ဟုပြောကြားသော်လည်း သတင်းစာထုတ်ဝေခွင့်ကိုနှာစေးနေခဲ့သည်။ မည်သို့ဆိုစေ လက်ရှိအစိုးရမှ ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာ ထုတ်ဝေမှုကိုချက်ချင်းခွင့်ပြုလုပ်လိမ့်ဦးမည်မဟုတ်ချေ၊ ယနေ့အခြေအနေအတိုင်း ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာများထုတ်ဝေခွင့်ကိုပေးလိုက်ပါက အစိုးရပိုင် သတင်းစာများဖတ်သူမရှိသည့်ကိန်းမုချဆိုက်ပြီး နှစ်မကူးခင်ပြုတ်နိုင်သဖြင့်အစိုးရသတင်းစာများ၏ဝါဒဖြန့် သတင်းစာဘဝမှခေတ်နှင့်လျှော်ညီသော ပုံစံပြောင်းပြီး ပုဂ္ဂလိကသတင်းစာများကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင် ဆင်နေ ကြောင်းထင်ရှားသည်။
လက်ရှိအုပ်ချုပ်သူများထဲမှတချို့သည် တလမ်းသွားအတွေးအခေါ်ဖြင့်ရှင်သန်ကြီးထွားလာသူများဖြစ်ကြသည်။ အရာရာကိုအာဏာသုံး၍ ဆုံးဖြတ် တတ်သော ညဉ်ဆိုးသည်အရိုးစွဲနေခဲ့သည်။ ပြည်သူကိုဂရုစိုက်စရာမလိုငါသိတယ်ငါတတ်တယ်၊ ဘယ်သူ့မှတိုင်ပင်စရာမလိုဆိုသည့်အစွဲရှိသည်။ ဥပမာ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဦးဇော်မင်း၏ မြစ်ဆုံစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်သော ပြောကြားမှုသည် ထိုစရိုက်ရှိသူများ၏ အကျင့်စရိုက်ကို လှစ်ဟ ပြလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုအမျှော်အမြင်နဲ့ဘယ်လိုအတွေးအခေါ်နဲ့များ ဝန်ကြီးဖြစ်လာသူလဲဆိုသည်က တွေးစရာဖြစ်သလိုတိုင်းပြည်အတွက် အထူးရင်လေးစရာဖြစ်သည်။ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာကို အစိုးရပိုင်သတင်းစာအဖြစ်သတ်မှတ်အသုံးပြုနေမှုသည် တလမ်းသွားအတွေးအခေါ်အကျင့်အကြံပင် ဖြစ်သည်။ တသက်လုံးဒီသတင်းစာတွေကို ငါတို့ပါတီအကျိုးအတွက်၊ ငါတို့အာဏာရရေးအတွက်၊ ငါတို့ဝါဒဖြန့်ချီရေးအတွက် အသုံးပြုမယ်ဆိုသည့် အတွေးအခေါ်သည် အာဏာရှင်ခေတ်ကအတွေးအခေါ်ဖြစ်သည်။ ယနေ့အထိ အာဏာရှင်ခေတ်ကအမူအကျင့်ကို မဖြောက်နိုင်ကြအတိုက်အခံသည် အစိုးရဖြစ်လာနိုင်သည် ဆိုသည့်အတွေးအခေါ်မရှိသည်လား? အတိုက်အခံကို ရှိယုံသာထားပေးပြီး ငါတို့ဘဲလက်ပြောင်းလက်လဲနဲ့ အာဏာဆက်ယူသွားမည်လားဆိုသည်ကိုစောင့်ကြည့်ရပေမည်။ မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ရလျှင် အစိုးရပိုင်သတင်းစာဆိုသည်မှာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုတွင် မရှိသင့်သောအရာတခုဖြစ်သည်။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်နှင့်နိုင်ငံရေးပါတီပိုင်သတင်းစာများရှိခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများက မိမိတို့ပါတီမူဝါဒ သဘောထားများကိုပြည်သူသို့ချပြဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြည်သူလူထု၏ထောက်ခံမှုကို ရယူခြင်းတို့သည်နိုင်ငံရေးပါတီများလုပ်ရမည့်အလုပ်ဖြစ်သည်။ အစိုးရ အလုပ်မဟုတ်။ အစိုးရအလုပ်သည် မိမိမူဝါဒများကိုသတင်းစာဆရာများသို့တင်ပြ၍ ထိုသတင်းစာဆရာများကနေ ပြည်သူသို့တဆင့်တင် ပြပေးခြင်းသာဖြစ်သည်၊ ကိုယ်ပိုင်သတင်းစာမလို အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရဟူသည် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရသည့်ပါတီကဖွဲ့စည်းရခြင်း ဖြစ်သဖြင့် ပါတီတခုသည် ရာသက်ပန်အာဏာစွဲကိုင်ထား၍ မရနိုင်ချေ၊ ရသည်ဆိုလျှင် ထိုနိုင်ငံသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်ချေ အာဏာရှင်နိုင်ငံသာ ဖြစ်ပေမည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်အစိုးရပိုင်သတင်းစာသည် အနိုင်ရပါတီ၏သတင်းစာဖြစ်နေသည်၊ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာမှ ဘက်လိုက်၍အတိုက်အခံပါတီနှင့် ထိုပါတီခေါင်းဆောင်များကို ဝေဖန်ခြင်း၊ တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကိုဗြောင်လုပ်လျက်ရှိသည်။ အတိုက်အခံပါတီအနိုင်ရပါက ထိုသတင်းစာသည် အတိုက်အခံပါတီကသုံးစွဲရမည့်သဘောရှိသည်။ သတင်းစာဟူသည် အာဏာရလာသောနိုင်ငံရေးပါတီများက တယောက်တလှည့်မောင်ပိုင်စီးပြီး မိမိတို့အကျိုးအတွက်မူဝါဒဖြန့်ချီရေးလုပ်ခွင့်ပေးသောစံနစ်သည် ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နှင့်လုံးဝဖီလာဖြစ်နေပေသည်။ မူလသတင်းစာချုပ်ကိုင်ထားသူများ အားလုံးဖယ်ရှားပစ်ရမည့်သဘောရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ၎စောင်လုံးကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်သတင်းစာထုတ်ဝေမှုကိုခွင့်ပြုမည်ဆိုလျှင် (၂၀၁၅) ရွေးကောက်ပွဲသည် တရားမျှတသည့်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် အတော်အတန် ကြိမ်းသေပြီဟု ပြောလို့ရနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက (၂၀၁၀) ကဲ့သို့ မဲလိမ်မဲခိုးမှုများနှင့်သာပြည့်နှက်နေပေလိမ့်မည်။ အမှန်တရားကိုထုတ်ပြောနိုင်သော၊ ဖွင့်ချနိုင်သောလွတ်လပ်သောသတင်းစာများမထွက်ပေါ်သေးသမျှ အမှန်တရားများကို မသမာမှုဖြင့် ပိတ်ပင်တားစီး မှုများက ရှိနေမည်သာဖြစ်သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုသည်ကလည်း စာအုပ်ထဲတွင်းသာ ဖတ်ကောင်းသည့်အဆင့်ရှိနေပေလိမ့်မည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပါရီမြို့အမေးအဖြေတွင် ဖြေကြားသွားခဲ့ရာတွင် “အတိုက်အခံဆိုတာတချိန်မှာအစိုးရဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသတိပြုမိဖို့လိုတယ်၊ တသက်လုံးအတိုက်အခံဖြစ်မနေဘူး” ဆိုသည့်စကားသည်အားလုံးသတိချပ်သင့်သည့်စကားဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် တိုင်းပြည်အာဏာကိုရယူထား သောစစ်တပ်၊ ကြံဖွံ့ပါတီနှင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအထူးစဉ်းစားရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်ကမဲရှုးံ၍ အတိုက်အခံဘဝရောက်လျှင် လက်ဝါးကြီးအုပ်ရယူထားသောအခွင့်အရေးများကို မဲအနိုင်ရသောပါတီကယူသွားပေမည်။ ထိုအခါကျမှ မတရားပါဘူးဟုပြောလို့မရ။ ယ္ခုကတည်းက မျှတအောင်အမြှော်အမြင်ရှိရှိပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့လိုပေသည်။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ ငါတို့ဘဲအမြဲအစိုးရဖြစ်ရမယ်၊ အတိုက်အခံဟာ အမြဲအတိုက်အခံ နေရာကနေမတက်စေရဘူးဆိုသည့်ညဉ်ဆိုးကို ဆက်လက်ထားရှိနေမည်ဆိုလျှင် မြန်မာပြည်သားတို့စစ်ကျွန်၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေး ကျွန်သဘောက်ဘဝမှ တက်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ချေ။ ပြည်တွင်းစစ်မီးသည်လည်း ဆက်လက်တောက်လောင်နေမည်သာဖြစ်သည်။
တိုင်းရင်းသားများအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ပြောရမည်ဆိုလျှင် သမ္မတကြီးမှ ကချင်ပြည်နယ်တွင် တိုက်နေမှုကိုရပ်ဆိုင်းရန်အမိန့်ပေးသော်လည်း ပထမတွင် ရှေ့တန်းသို့သတင်းမရောက်သေးလို့ပါဟုဆင်ခြေပေးခဲ့ပြီး သမ္မတအမိန့်ကိုဖီဆန်ပြီးဆက်လက်တိုက်နေသည်မှာ တနှစ်ကျော်လာသည့် ယနေ့ အထိပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အမှန်တကယ်အာဏာသည် အခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတတွင်တကယ်ရှိမှရှိရဲ့လား ရုပ်သေးသမ္မတ (သို့မဟုတ်) စစ်တပ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်သော အကန့်အသတ်သာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော သမ္မတလားဟုထင်စရာဖြစ်လာခဲ့ပေသည်။
နောက်တချက်ကလည်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးအောင်မင်းနှင့်အပြီုင်လုပ်နေသော ဦးအောင်သောင်းသည် တင်းမာသူတဦးဖြစ်သူဟု ကြော်ကြားပါသည်။ သို့ရာတွင် ဦးအောင်သောင်းဆွေးနွေးပွဲတွင်ပါဝင်မလာတော့ဘဲ ဦးအောင်မင်းတဦးတည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရလာခဲ့ပါသည်။ တခုသတိ ပြုမိသည်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရလာသည့် (SSA) နှင့် (KNPP) တို့နှင့် ယခုရက် အတွင်းတိုက်ပွဲများပြန်လည်ဖြစ်လာသည်မှာ ဦးအောင်မင်းကြိုးစားမှုကို စစ်တပ်မှ လက်မခံကြောင်းအချက်ပြခြင်းလားဟုထင်စရာရှိသည်။ ထိုအချက်များကြောင့်စစ်တပ်သည်သမ္မတအမိန့်ကိုမနာခံဘဲ ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လှိုင် က သူ့သဘောသူဆောင်နေသည်ဟု မှတ်ချက်ပေးရမလိုအခြေအနေကဖြစ်နေသည်။
နိဂုံးအားဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်မြေခွေးတွင်းထဲသို့ဝင်ရောက်သွားပြီဖြစ်သည်၊ ဒေါ်စုနှင့်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက စစ်မှန်သောဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကြီး ပေါ်ပေါက်လာစေရန် ရည်သန်၍အများအကျိုးအတွက် ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ညီသောဥပဒေသများကို လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည့်အခါ မြေခွေးနှင့်ဝံပုလွေများက ဝိုင်းကိုက်ကြမည်လား၊ လက်ခံမည်လားစောင်ကြည့်ရပေမည်။ သားစားကြူးသော သားရဲတွင်းသို့ ဒေါ်စုရဲရင့်စွာ ဝင်ရောက်သွားပြီ၊စောင့်ကြည့်အားပေးရမည်ကကျွနုပ်တို့တတွေ။
အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးစစ်ကျွန်ဘဝဆိုးမှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်၍ မြန်မာလူမျိုးများကမ္ဘာတွင်
မော်ကြွားနိုင်သောလူမျိုးများဘဝသို့ ရောက်ရှိရေးကို ရည်မှန်းလျက်
ထွန်းအောင်ကျော် ( ခေတ္တ အီသီကာမြို့၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ)
ဂျူလိုင် ၂ ရက်၊ ၂၀၁၂၊ ညနေ၇နာရီ ၃၈မိနစ်
အာဏာရှင်များကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေတဲ့ ဇူလိုင် (၇) လျှို့ ဝှက်မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း။
၁၉၈၃-၈၄ခုနှစ်ထုတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းဟာ ၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (ရ)ရက်နေ့ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို လျှို့ ဝှက်စွာ ပြန်လည်ဖော်ကျူးခဲ့တယ်ဆိုတာ သိရှိသူ အင်မတန်နည်းပါးခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားထုအတွင်းနဲ့တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွေမှာ ဒီမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းအကြောင်းလေးဟာ တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့ပျံ့ နှံ့ ခဲ့ပါတယ်။ သိပ်မကြာပါဖူး တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နားကနေ ဒီအကြောင်း မဆလစစ်အစိုးရနားထဲကို ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ မဆလအာဏာရှင်တွေဟာ ထိတ်လန့် တကြားနဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်း ဖြန့် ချီနေမှုကို တရားဝင်မကြေညာဘဲ ပိတ်ပင်ပါတော့တယ်။ စစ်စုံထောက်တွေဟာလည်း ကမန်းကတန်း ဒီမဂ္ဂဇင်းတွေကို စာအုပ်ဆိုင်တွေကနေ လိုက်လံသိမ်းဆည်းပါတော့တယ်။ လက်ဝယ်ရှိနေသူများကိုလည်း ဒီအကြောင်းတွေ မပြောဖို့ ၊ မဂ္ဂဇင်းကို ပြန်အပ်ဖို့ချိမ်းခြောက်ပြောဆိုပါတော့တယ်။
ဘာဖြစ်လို့ များ ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းဟာ အာဏာရှင်တွေကို ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်စေရတာလည်း။
မဂ္ဂဇင်းထဲပါ ရေးသားထားတဲ့ ကဗျာတွေ၊ ဆောင်းပါးတွေ၊ ကာတွန်းတွေ၊ ၀တ္တုတိုတွေ အစရှိတာတွေဟာ မဂ္ဂဇင်းမထုတ်ခင်ကတည်းက မဆလရဲ့ကြိုးကိုင် စာပေစီစစ်ရေးနဲ့ ဆင်ဆာတည်းဖြတ်ရေးအဖွဲ့ က မဆလအစိုးရကို ညှိစွန်းစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကို ခွင့်မပြုဘဲ တည်းဖြတ် ချန်ဖြတ် ပယ်ထုတ်ပြီးသားပါ။
ကံအားလျော်စွာဘဲ ဒီအကြောင်းအရာတွေ မသိခင်မှာ၊ ကျွန်တော်လက်ထဲမှာ နှစ်ပါတ်လည်စာစောင်အဖြစ် အမှတ်တရသိမ်းထားရအောင်ဆိုပြီး ၀ယ်ယူခဲ့လို့ဒီမဂ္ဂဇင်းတစ်အုပ်ရှိနေပါတယ်။ မဆလစစ်အစိုးရကို ထိခိုက်စေရလောက်တဲ့ ရေးသားချက်များ မတွေ့ ရပါဖူး။
စာပေ၀ါသနာပါသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရော၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရော မြတ်နိုးစွာနဲ့ ဘဲ ဒီမဂ္ဂဇင်းစာအုပ်ကို အခေါက်ခေါက် ဖတ်ပြီးသားပါ။
ဒါပေမယ့်ဗျာ၊ ဒီမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းဟာ ၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (ရ)ရက်နေ့မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို လျှို့ ဝှက်စွာ ပြန်လည်ဖော်ကျူးတာလို့ကြားရသိရတဲ့အခါမှာတော့၊ ဒီမဂ္ဂဇင်းကို လိုက်သိမ်းနေတယ်လို့ကြားရတဲ့အခါမှာတော့ ကျွန်တော် အတော့်ကို စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ဒါနဲ့ သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေ ကမန်းကတန်းပြန်ရှာပြီး မျက်နှာဖုံးကိုကြည့်ကြည့်တယ်။ ဘာမှထူးခြားတာ မတွေ့ ဖူး။ ထပ်ခါထပ်ခါ ကြည့်တယ်၊ ဘာမှလည်းမတွေ့ ပါလားဆိုပြီးနေခဲ့ရာကနေ၊ နောင်တော်ကျောင်းသားကြီးတစ်ယောက်ကနေ ပြောပြမှဘဲ သိသွားတွေ့ သွားပါတော့တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်ပြီး တိုးတိုးတိတ်တ်ိတ် လေး အဖန်ဖန်ကြည့်မိနေပါတော့တယ်။
ကျွန်တော်မြင်တာက ဒီဟာ ဒီမှာ၊ ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေက သူတို့ မြင်တာ ဒီမှာ ဒီဟာဆိုပြီး ကြည့်လေမြင်လေဖြစ်နေပြီး၊ မမှီခဲ့တဲ့ ဇူလိူင် (ရ)ရက် ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦး ဖြိုချဖျက်ဆီးခံရမှုဟာ ကျွန်တော်တို့နောင်လာနောက်သား ညီတော်ကျောင်းသားတွေရဲ့ စိတ်အတွေးထဲမှာ ကိန်းအောင်းဝင်လာပါ တော့တယ်။
ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခဲ့ကြသူတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းစာစောင်ဖြစ်မြောက်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားကြီးတွေကတော့ မဆလစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ခေါ်ယူစစ်ဆေး မေးမြန်းထိန်းသိမ်းခြင်းကို ရဲဝန့် စွာနဲ့ ခံယူရပါတယ်။
မဆလစစ်အာဏာရှင်ရဲ့ ကျောင်းသားတွေအပေါ် ရက်စက်ယုတ်မာမှု သမိုင်းဟာ ဖုံးကွယ်လို့ မရအောင် ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာတိုင်း မဆလအာဏာရှင်တွေဟာ သွေးခြောက်ခြားပြီး၊ ကျဆုံးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဟာ သူတို့ ကို ကြေက်လန့်တုန်လှုပ်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ဒီ ၁၉၈၃-၈၄ခုနှစ်ထုတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းအကြောင်းကို သိသိချင်းမှာဘဲ ပိတ်ပင်တားဆီး ပြန်လည်သိမ်းခဲ့တာပါ။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းလေးမှာ ဘာတွေပါလဲ၊ ၁၉၆၂ဇူလိုင်လ (ရ)ရက်နေ့ မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုကို ဘယ်လို လျှို့ ဝှက်ပုံတွေ ဖေါ်ထားသလဲ ဆိုတာ ပုံများနဲ့ တစ်ကွ ပြန်လည်ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ မှန်ဘီလူးလေးတစ်ခုနဲ့ အသေးစိတ်ကြည့်ရင်တော့ ကျွန်တော်ဖေါ်ပြထားတာထက် ပိုပြီးတွေ့ မြင်ကြရမှာပါ။
ဒီရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်း မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းလေးကို ကြည့်ရင်းဖြင့်၊ ၁၉၆၂ခုနှစ်က နောင်တော်ကျောင်းသားကြီးများကို ဦးညွတ်အလေးပြုလိုက်သလို၊ နောင်လာနောက်သား ညီတော်ကျောင်းသား ကျောင်းသူအပေါင်းကိုလည်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ ငါတို့ တစ်တွေရဲ့ကျောင်းသားသမိုင်း ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားမှာ မဟုတ်ပါဖူး ဆိုတာပါ။
အာဏာရှင်အပေါင်းကိုလည်း ဒီမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းကို ပြန်လည်မြင်တွေ့စေပြီး၊ ကျုပ်တို့ ရဲ့အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်မှုဟာ ခောတ်အဆက်ဆက် ပြောင်းပေမယ့် ဆက်လက်တည်ရှိနေမယ်ဆိုတာ၊ ကျုပ်တို့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ သွေးဟာ မခြောက်သေးဖူးဆိုတာ ကမ္ဘာမြေကြီးကို တိုင်တည်ပြီး သိစေအပ်တယ်။ ဒီမဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်းဟာ သင်တို့အာဏာရှင်တိုင်းကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားပါစေသောဝ်။
ကြည့် ဖို့ နဲ့ ၊ အသေးစိတ် လျှို့ ဝှက်ပုံများကို ကြည့်ကြပါ။)
ဒီလို အာဏာရှင်များကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားစေတဲ့ တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်း စာစောင်ရဲ့ရှေ့ မျက်နှာဖုံးနဲ့နောက်မျက်နှာဖုံးတွေမှာ ဇူလိုင် (၇) နဲ့ပတ်သက်တဲ့ လျှို့ ဝှက်ပုံတွေ ထည့်သွင်းရေးထားတာတွေကို ပိုမိုတွေ့ လိုတွေ့ ငြား ရှာကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မျက်နှာဖုံးအရှေ့ နဲ့ အနောက်နှစ်ခုလုံးကို ကာလာပရင့် (colour print) နဲ့ပုံကြိး ထုတ်ပြီး မှန်ဘီလူးလေးနဲ့ကြည့်ကြည့်ဖို့ ပါဘဲ။
အဆိုပါ နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းတွင်လည်း - မျက်နှာဖုံးတွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အတွင်းရှိ သစ်ပုတ်ပင်၊ သစ်ပုတ်ပင်၏ ပင်စည်မှာ လက်သီးလက်မောင်းတန်းနေသောပုံနှင့် နီညိုရောင် သွေးများ စီးဆင်းကျဆင်းနေပုံ၊ သစ်ပုတ်ပင်၏ အရွက်များမပါဘဲ သစ်ကိုင်းများသည် ကဒေါင်းပုံသဏ္ဍန်ပုံ၊ သခင်းကိုယ်တော်မှိုင်းနှင့် ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းပုံ၊ ဦးသန့် အုတ်ဂူတွင် သင်္ကန်းလွှမ်းခြုံထားပုံ၊ ကဒေါင်းပုံနဲ့စစ်သားမှ ဘက်နက်နဲ့ထိုးနှက်နေပုံ၊ သစ်ပုတ်ပင်၏ အကိုင်းအခက်များအကြားတွင် သမိုင်းဝင် ရက်စွဲများ ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားပုံတို့ပါရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်းများကို အာဏာရူးများမှ ချက်ချင်း လိုက်လံ သိမ်းဆည်းပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
အထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုတာကတော့ - ယခု ဖေါ်ပြပြောဆိုခဲ့တဲ့ သမိုင်းဝင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်းများ လက်ဝယ်ရှိသူများအနေနဲ့အများပြည်သူ သိရှိရစေရန်အတွက် ပြန်လည်ဖေါ်ပြပေးပါလို့အထူး အနူးအညွှတ် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။
ပုံ (၁) - ၁၉၈၃-၈၄ခုနှစ်ထုတ် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှစ်ပါတ်လည်မဂ္ဂဇင်းစာစောင် ရှေ့ မျက်နှာဖုံးဒီဇိုင်း။
ပုံ (၂) - ကျဆုံးသွားသောကျောင်းသူကျောင်းသားများရဲ့ အခေါင်းအား သယ်ဆောင်လှည့်လည်နေသည့်ပုံ။
ပုံ (၃) - အာဇာနည်ဟု စာတန်းပုံသဏ္ဍန်ရေးထိုးထားသော ကျောင်းသူကျောင်းသား တို့ ၏ အုတ်ဂူ။
ပုံ (၄) - ကျောင်းသူကျောင်းသားများ စီတန်းလှည့်လည်နေကြပုံ။
ပုံ (၅) - ဇူလိုင် (ရ) ရက်နှင့် (၈) ရက်နေ့ တွင် ကျဆုံးခဲ့သောသူများအကြောင်း ကျန်ရစ်သူ ကျောင်းသူကျောင်းသားအပေါင်းအား ရှင်လင်းပြနေပုံနှင့်၊ အာဏာရှင်အား ကမ္ဘာမကြေဖူးဟု ဖေါ်ကျူးထားသော လက်သီးဆုတ်ပုံ။
ဒီ တက္ကသိုလ်နှစ်ပါတ်လည် မဂ္ဂဇင်း စာစောင် နောက်မျက်နှာဖုံးမှာလည်း နံပါတ် (၇) ပုံအား ပန်းပွင့်များဖြင့် ဗြောင်းပြန် ရေးဆွဲဖေါ်ကျူးထားတာကိုလည်း တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်..။
နစ်နေမန်း မှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်..။